ANC Archives - Gagasi World
Ungqongqoshe ehhovisini likamengameli, uJackson Mthembu, uthi uhulumeni uzimisele ukuthola ezinye izindlela zokukhulisa umnotho wakuleli. uMthembu ubekhuluma nabezindaba ngaphambi kokuba kuqale umhlangano wekhambinethi owaziwa ngeCabinet Lekgotla ePitoli. Umnotho wakuleli ukhula kancane ngendlela emangalisayo nokwenza ukuba kungabilula ukudala amathuba emisebenzi. uMthembu uthi bazobheka bese begxila kumikhakha okuyiyona engasiza ukukhulisa umnotho. listen here: Content hosted by iono.fm By: […]
Bavelile abalisa abasolwa ngokubulala intombazanyana engakhulumi
By: Nompendulo Ngubane Umphakathi waku ward 33 endaweni yakwa Jika Joe eMaritzburg, uthi uzoqhubeka nokweseka umndeni wentombazanyane eneminyaka engu 13 ubudala eyanukubezwa yabe isibulawa. USnegugu Mthembu, owayengakwazi ukukhuluma wabulawa ngesihluku emva kokunyamalala kade egcinwe edlala momngani wakhe ngo July kulonyaka. Isdumbu sakhe sabe sesitholakala osebeni lomfula okuyo lendawo, bude buduze nomuzi wakubo. Amalungu omphakathi […]
i-ANC ithi ifuna incazelo ngesikweletu samabhasi
By: Bongani Gina I-ANC kulesfundazwe ithi isicele izikhulu zikamaspala weTheku ukuthi zihlanganise umbiko mayelana nesikweletu sika R600 million okuthiwa lomaspala usikweletwa yinkampani yamabhasi iTransnat. Kanti umaspala ususabise ngokudla amabhasi alenkampani ukuzama ukucover lesi sikweletu Ethula umbiko kanye nezinqumo zomhlangano wobuholi be ANC esfundazweni unobhala walenhlangano, uMdumiseni Ntuli, uthi bazoyixazulula lenkinga. Listen here: Content hosted by […]